Huanglong, बहुरंगी पोखरी र विश्व सम्पदा | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | चीन, के हेर्ने
चीनमा युनेस्कोले घोषित गरेका थुप्रै साइटहरू छन् विश्व सम्पदा र ती मध्ये एक एक तपाईंले फोटोग्राफमा देख्नुभयो: रंगीन र अद्भुत क्षेत्र भनिन्छ हुआangलाong। यदि तपाइँ चीन जान्न चाहानुहुन्छ र बेइजि,, शंघाय र ह Hongक Kong भन्दा पर जान चाहनुहुन्छ भने तपाइँका कदमहरूले तपाइँलाई सिचुआनमा लैजानुपर्नेछ।
यो आरामदायक गन्तव्य वा नजिकको होईन, तर यात्रा र ल्याण्डस्केपहरूको बीचमा जब तपाईं पुग्नुहुनेछ तपाईंलाई प्राप्त हुनेछ, यो पक्कै तपाईंको जीवनमा एक ठूलो साहसिक हुनेछ। यो १ 1992 XNUMX २ देखि विश्व विरासत साइट भएको छ र यसको कारण पत्ता लगाउन तपाईंले व्यक्तिगत रूपमा हेर्नु पर्छ।
Huanglong ऐतिहासिक र प्राकृतिक रुचि क्षेत्र
मैले माथि भनें सिचुआनमा छ, मिन्शान पर्वत श्रृंखला भित्र, सिचुआन राजधानी चेng्गदूबाट करीव kilometers०० किलोमिटर, र १uz144 किलोमिटर दक्षिण ज्यूजुईगौको। बदलेमा, यो Huanglong प्राकृतिक दृश्य हो र उही नामको राष्ट्रीय पार्क।
फोटोहरूले तपाईंलाई एक साइट देखाउँदछ जुन परिकथाबाट बाहिर केही देखिन्छ। तारा एक खोला हो, कल पहेंलो ड्र्यागन कवच, जुन केवल साढे तीन किलोमिटर भन्दा बढीको यात्रा गर्दछ र त्यो टाढाबाट पापी सुनौलो ड्र्यागनसँग मिल्दछ। र यो यो छ कि त्यहाँ कार्बोनेटेड क्याल्शियमको भण्डार छ, धेरै तहहरू, सम्पूर्ण वन र हिमनदीहरूको घाँटीमा। गठन गरेको छ विभिन्न उचाइहरूमा पोखरी र त्यहाँ झरनाहरू छन् कि तिनीहरूलाई लिंक।
सुनौलो पोखरी र झरनाहरूको मुख्य यात्रा एउटा प्राचीन बौद्ध मन्दिरबाट सुरु हुन्छ जुन उपत्यकामा माथि छ र एक सुन्दर पोखरीमा अन्त्य हुन्छ भिजिटर्स पोन्ड भनिन्छ। ठाउँको र colors्ग बर्षको समय अनुसार फरक हुन्छ तर आकार पनि किनभने पोखरी ठूला वा सानो वा पहेँलो, खैरो, नीलो र हरियो बीच बिभिन्न शेडहरू छन् कि त यो तातो वा चिसो छ यसमा निर्भर गर्दछ।
शताब्दीयौंको दौडान यस ठाउँको भूगर्भ गठन गरिएको छ। खनिज निक्षेपहरू भुईंमा फाँसिएका छन् र यी सिर्जना गरेका छन् प्राकृतिक तातो वसन्त पोखरी विभिन्न गहिराईको। पानी एकबाट अर्कोमा स्लाइड हुन्छ र यसले सम्पूर्ण उपत्यकामा पनि गुफाहरू खन्दछ। त्यहाँ खालको दुवै किनारमा उहि पर्वतहरू र उही नदीहरू पोखरीहरू बीचमा बग्दछन् र यसको मार्गमा आगन्तुकहरूलाई किन यो साइट कोब्राडा डेल ड्रैगन अमरिलो भनिन्छ भनेर सम्झना गराउँछ।
अर्कोतर्फ, चीनको यस भागमा धेरै प्रजातिहरूको घर छ, जसमध्ये तीमध्ये एउटा हो विशाल पाण्डा र सुनहरी बाँदर। यो होइन कि तपाईं यी जनावरहरू निश्चित रूपमा देख्न सक्नुहुनेछ तर तिनीहरू यहाँ बस्छन् र यसले परिदृश्यलाई मूल्य बढाउँदछ। यो पोखरीको बारेमा मात्र होईन, ठाउँसँग धेरै राम्रा साइटहरू छन्: त्यहाँ एक छ १ meter मिटर अग्लो झरना, गुफा, टिब्बा, मन्दिर र धेरै रंगीन पोखरी फेन्सी नामहरूको साथ। सबै सदाको सेतो चुचुराहरू द्वारा अँगालेको छ जुन १1700०० मिटर र 5588 XNUMX मिटर उचाईको बीचमा, हिमनदी समावेश सम्पूर्ण क्षेत्र को बारे मा 60 हेक्टर छ।
आज सरकारले ए 4.2.२ किलोमिटर काठको पैदल मार्ग जुन भुइँमा साथ जान्छवा ट्राभर्टाइन र यसले आगन्तुकहरूलाई चार घण्टा पैदल हिंड्न मान्न मद्दत गर्दछ। साथै, उच्च मौसममा एक छ केबलवे.
तपाईं कसरी चीनको यस कुनामा पुग्नुहुन्छ? खैर तपाईं एक लिनुहोस् ट्रेन वा बस बेइजि in मा तपाईंलाई चेंng्डु लैजान। यस शहरको जीउझाइगौ स्टेशनबाट तपाईं बस चढ्नुभयो ह्वांगलाong राष्ट्रिय निकुञ्जमा। बसको पहिलो प्रस्थान समय बिहान7मा छ, यो साढे तीन घण्टा लाग्छ, र साँझ 3, :3::30० मा शहर को लागी छोड्दछ। यो तालिका जाँच गर्न आवश्यक छ।
त्यहाँ त्यस्ता बसहरू पनि छन् जुन चेng्गदूलाई Huanglong एयरपोर्टसँग जोड्दछ र यदि तपाईं लिन सक्नुहुन्न भने ट्याक्सी। जियुहाइगु बाट चार घण्टामा यात्रा हिसाब गर्नुहोस्। तपाई जहिले पनिaको लागी साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ भ्रमणसब भन्दा लोकप्रिय सात दिनको टुर हो जुन ज्यूजुगौ र चेng्गदू हुँदै जान्छन्, जसमा प्रायः pan 56 माईल टाढा पर्ने सांग्पानको लागि पैदल यात्रा हुन्छ।
पार्कमा प्रवेश गर्न करीव $ 30 लागत प्रति वयस्क उच्च मौसममा र अधिक कम, १० डलर, कम मौसममा। पीक सीजन अप्रिल १ र नोभेम्बर १ between बीच रहन्छ र पार्क बिहान 10 देखि साँझ 1 सम्म खुल्ला रहन्छ। भ्रमण गर्नका लागि सबैभन्दा उत्तम महिनाहरू, कम्तिमा न्यानो, जुन जुलाई र थकाइ हुन्, यद्यपि शरद ocher र सुनको रंगहरू सुन्दर छन् किनकि ती सयौं पोखरीहरूमा अद्वितीय तरीकाले प्रतिबिम्बित हुन्छन्।
स्पष्ट रूपमा, जाडोमा पनि यसको आकर्षण छ किनकि तातो पानी पोखरी बाहेक जताततै हिउँ छ त्यसैले तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि रंगहरूको त्यो खेल। स्थान फ्रिज भएको बाहेक, यो उत्तम फोटोहरू लिनु हो। मानौं तपाईंले गर्नुभए जस्तो तातो महिनाहरू जुलाई र अगस्ट हुन्, जुन तापक्रम १º डिग्री सेन्टिग्रेड हो। यदि तपाईं डिसेम्बर देखि फेब्रुअरी मा जानुहोस् तापमान 16ºC वा कम। वर्षा seasonतु मेदेखि अगस्त सम्म हुन्छ र यहाँ बिहान र दिउँसो कुहिरो लाग्छ। याद गर्नुहोस् कि यो उपत्यका हो र त्यो तापमान सधैं फरक फरक हुन्छ.
जब तपाईं भ्रमणको योजना गर्नुहुन्छ, सब भन्दा धेरै सुरु गर्न व्यवस्थित गर्न कोशिस गर्नुहोस् किनभने पार्क तपाईंलाई निश्चित रूपमा सबै दिन लाग्नेछ। मैले उल्लेख गरेको पैदल मार्ग किलोमिटर उकालोमा चल्दछ र त्यसपछि तपाईं रिभर्स गर्न केबलवे लिन सक्नुहुनेछ। खाना, आरामदायक जुत्ता, पानी र वर्षालाई भगाउने चीज ल्याउन सुझाव दिइन्छ। त्यहाँ पसलहरू र बाथरूमहरूको क्षेत्र छ, भाग्यवश, तर तपाईंले आफ्नो आफ्नै ल्याउनु पर्छ अधिक र हो, शौचालय कागज तिर्न रोक्नको लागि।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » के हेर्ने » Huanglong, बहुरंगी पोखरी र विश्व विरासत